Dawladda Kenya iyo dalalka reer galbeedka oo isku mari la' dhaqaalaha dagaalka Soomaaliya.
Written by gobal on 26 January 2013. Dawladda Kenya oo ka mid ah dawladaha ugu musuq maasuqa badan dawladaha Afrikaanka ayaa dood kulul ka keentay waxa ay ugu yeertay meer meeris ay kula dhaqmayaan dawladaha fan gareeya dagaalka Soomaaliya kuwaas oo Kenya kaga baxay ballamo ay hore uga qaadeen.
Shir xasaasi ah oo ay yeesheen Golaha wasiirada Kenya ayaa laga soo qeybgaliyay madaxweynaha dalkaasi iyo masuuliyiin kale kuwaas oo dhamaantood ka arrinsanayay mashaakilka Kenyaatiga ka heysta taakuladaciidanka iyo maalgelinta duulaankooda.
Shirka oo dood adag lagu hordhigay xukuumadda ayaa waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka gaashaan dhigga Kenya Yuusuf Xaaji oo ka hadlay xaaladaha ciidamadooda jooga Soomaaliya iyo cawaaqib xumidii ay ka dhaxleen duulaankooda Soomaaliya.
bilaahi towfiiq	January 25, 2013